တရုတ်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါရှိသူ မိခင်မှ ကလေးသုံးမြွှာပူး မွေးဖွား - Xinhua News Agency
သုံးမြွှာပူးကလေးငယ်များအား ခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးနေသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ဩဂုတ် ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကူမင်း၊ ဩဂုတ် ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ရောဂါရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဦးသည် ဩဂုတ် ၁၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သော ရွှေလီမြို့ရှိ သတ်မှတ်ထားသော ဆေးရုံ၏ ကွာရန်တင်းဧရိယာ၌ ကလေးသုံးမြွှာပူး မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးကော်မရှင်က ဩဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရပ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးလည်း ဖြစ်ပေသည်။မွေးကင်းစကလေးငယ်များ၏ ပထမဆုံး nucleic acid စစ်ဆေးမှုများမှာလည်း ရေမွှာအရည်၊ အာခေါင်တို့ဖတ်များနှင့် အစာချေအရည်များမှ နမူနာများ ရယူခဲ့ရာ အားလုံးတွင် ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ဇူလိုင် ၉ ရက်က COVID-19 အတည်ပြုလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်ရောက်ခဲ့ချိန်တွင် ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အထူးမွေးကင်းစအဆောင်သို့ လွှဲပြောင်းလာသော ကလေးငယ်အား အသက်ရှူစက်တပ်ဆင်ပေးနေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရင်ကအတွေ့အကြုံမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ရဲ့ တတိယမြောက် သုံးလအပိုင်းအခြားရှိနေတဲ့ COVID-19 လူနာတွေရဲ့ အခြေအနေက အင်မတန်ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒယ်လ်တာ (Delta) ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူတွေဆိုရင်ပေါ့။ ဒါကြောင့် မိခင်နဲ့ ကလေးတွေက အချိန်မီ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ထိထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်” ဟု ယူနန်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးကော်မရှင် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး Bai Song က ပြောခဲ့သည်။
ဗဟိုအစိုးရ ၊ပြည်နယ်ဆိုင်ရာနှင့် မြူနီစီပယ်အဆင့်မှ ဦးဆောင်ဆရာဝန် ၃၂ ဦးပါဝင်သော ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အား ရွှေလီမြို့သို့ အဆောတလျင်စေလွှတ်ခဲ့ကာ ယင်းမိခင်အား အချိန်မတိုင်မီ မွေးဖွားမှုမှ ကာကွယ်ရေးကုသမှုအစီအစဉ်ကို အထူးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများကလည်း ၎င်း၏ အခြေအနေအား ၂၄ နာရီ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် မိခင်၏ အခြေအနေမှာ ဆိုးလာခဲ့ပြီး ရောဂါပြင်းထန်သူအဖြစ် ၎င်းအား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ စောင့်ရှောက်မှုကြောင့် ၎င်း၏ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် အချိန်မတိုင်မီ ကလေးမွေးဖွားမည့်အန္တရာယ်မှာ တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာခဲ့ကာ ၎င်း၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလမှာလည်း ၃၂ ပတ်သို့ ဆွဲဆန့်နိုင်ခဲ့သည်။
ဩဂုတ် ၁၁ ရက်တွင် စောင့်ကြည့်မှုအရ အကာအကွယ်ဝတ်စုံများနှင့် အသက်ရှူစက်များ အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားသော ဆရာဝန်များက ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နံနက် ၁၀:၀၈ နာရီ၌ ကလေးငယ်များအား မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေဟာ အခြေအနေကောင်းမွန်နေပြီး အထူးကျန်းမာရေးယူနစ်မှာ စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်” ဟု ကူမင်း ဆေးတက္ကသိုလ်၏ ပထမမိတ်ဖက်ဆေးရုံနှင့် ကုသရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ကလေးအထူးကုဆရာဝန် Duan Jiang က ပြောခဲ့သည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် သုံးမြွှာပူးကလေးငယ်များအား တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အသက်ရှူနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်စေရန် အာဟာရကျွေးမွေးခြင်း အစီအစဉ်အကြမ်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်း Duan က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
KUNMING, Aug. 12 (Xinhua) — A pregnant woman with COVID-19 Wednesday morning gave birth to triplets in the quarantine area ofadesignated hospital in southwest China’s border city of Ruili, the Yunnan provincial health commission said on Thursday. It is the first case of its kind in China.
The newborns’ first nucleic acid tests — performed on samples taken from amniotic fluid, throat swabs and gastric juice — were all negative.
The woman, 29, was just 28 weeks pregnant when she was hospitalized asaconfirmed COVID-19 case on July9in southwest China’s Yunnan Province.
“Our previous experience shows that the condition of COVID-19 patients in the third trimester of pregnancy is very complicated, especially if they are infected with the Delta variant. So it is urgent to ensure that the mother and babies receive timely, accurate and effective treatment,” said Bai Song, deputy director of the Yunnan provincial health commission.
A medical team consisting of 32 leading doctors from the state, provincial and municipal levels were rushed to Ruili and customizedatreatment plan for her while preventing premature birth. Doctors and nurses were on duty 24 hours to closely monitor her condition.
The mother’s condition deteriorated and she was categorized asasevere case on July 12. But thanks to the care of the medics, her symptoms and risk of premature birth gradually diminished, and her gestational age was extended to 32 weeks.
On the morning of Aug. 11, doctors in hazmat suits and full-cover respirators performedacesarean section, and at 10:08 a.m., the babies were born.
“The infants are in stable condition and are being cared for in the special care unit,” said Duan Jiang,apediatrician with the First Affiliated Hospital of Kunming Medical University and member of the treatment team.
Duan added that they are draftingafeeding plan for the triplets to help them maintain stable breathing and promote their growth and development. Enditem
1- On August 11th, the medical staff performed caesarean section on the parturient. (Xinhua News Agency)
2-On August 11, medical staff administered non-invasive respiratory support toababy who had just been transferred toaspecial neonatal unit. (Xinhua News Agency)